''Gamtaa manneen murtee Islaamummaa balleessina jennee, al-Shabaabiin uumne'' - BBC News Afaan Oromoo
''Gamtaa manneen murtee Islaamummaa balleessina jennee, al-Shabaabiin uumne''
Goodayyaa suuraa Dhoo'insa Moqadiishootti dhiheenya kana uumame.
Haleellaan boombii Somaaliyaatti raawwate, hawaasni idil-addunyaa deeggarsi biyyattiif taasisu hammam akka xinnaate kan agarsiisu tahuu, Ministirri Muummee Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalany himan.
Kanas kan dubbatan gaaffilee mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'an wayita deebisanitti.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa waliin walqabatee qeeqamuus, muummichi ministeeraa garuu, gama al-Shabaab waraanuuniifi mootummaa Somaaliyaa hundeessuun shoora olaanaa taphachuu isaanii dubbatu.
Dhoo'insa Somaaliyaan qondaaltonni nageenyaa ari'aman
Dho'iinsa bombii Moqaadishootti gaheen namoonni 350 ol du'an
''Hawaasni idil-addunyaa deeggarsa Somaaliyaaf kennu dhaabeera. Humni nageenya eegsisuu Gamtaa Afrikaas lakkoofsi isaa daran hir'atus, nuti garuu bajata keenyaanis ta'e cimsinee itti fufsisna.'' jedhaniiru.
Mootummaan giddugalaa Somaaliyaa kan diigame, erga milishoonni mootummaa Siyaad Baarree fonqolchanii booda. Ergasii biyyaattiin mootummaa malee waggoota 20 oliif adeemte.
Somaaliyaatti mootummaa hundeessuuf, jaarsummaa biyyoota garagaraatiin yaaliin taasifamaa turan. Mootummoota Gamtooman, Gamtaa Awurooppaa fi Gamtaan Afriikaa yaalii taasisaa turan.
Walitti bu'insa bubbule
Itiyoophiyaan gamtaa manneen murtee Islaamummaa to'achuuf, filannoon isheen qabdu waraana ishii gara Somaaliyaatti erguu qofa turee? gaaffii jedhuuf, ''Waraana kallattiin biyyattiitti erguun balaa qaba,'' jechuun kan deebisan - xiinxalaa seenaa, walitti bu'insaa fi nageenyaa Gaanfa Afriikaa kan tahan Piroofesar Madihaanee Taaddasaadha.
Keessattuu waldhabdee Itiyoophiyaafi Somaaliyaan seenaa keessatti qabaniin walqabatee, waraanni Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessa seenuun isaa - dhaadeessitoota Islaamummaaf kaka'umsa guddaa kan uumeedha.
''Gamtaa manneen murtee Islaamummaa balleessina jennee seennee, al-Shabaabin uumne'' kan jedhan Piroofesar Madihaanee, Itiyoophiyaa - Somaalee waliin akkasumas Kiristaanummaa fi Islaamummaa gidduutti akka tahe fakkeeffameera jedhu.
Goodayyaa suuraa Waraana Itiyoophiyaa Somaaliyaatti
Yeroo gara garaatti ka'umsa isaanii Somaaliyaa godhachuun naannicha jequuf humnoonni ka'an kan turan tahuu kan ibsan Piroofesar Madihaanee, gareewwan al-Itihaadii fi al-Islaamiyaa jedhaman maqaa dhahu.
''Gamtaan manneen murtii Islaamummaa yookaan al-Shabaab dhufuu isaanittiin dura, Itiyoophiyaan waraanashee gara Somaaliyaa erguun wanta harayaa miti,'' jedhu Piroofesar Madihaanee.
Imaammanii alaa Itiyoophiyaan Somaaliyaarratti qabdu - Somaaliyaan tasgabboofte nageenya Itiyoophiyaafis fayyaddi kan jedhudha. Haatahu malee, biyyattiin garee yookaan mootummaa dhaadeessitoota Islaamummaan akka bultu hin barbaaddu.
Faallaa kanaan xiinxaltoonni siyaasaa Somaaliyaa, ''Itiyoophiyaas tahe Keeniyaan, Somaaliyaa tasgabboofte arguu hin barbaadan,'' yogguu jedhan, Piroofesar Madihaaneen ammoo kun wal jibbinsa bubbule waliin walqabata jedhu.
Piroofesarichi itti ida'un, ''Somaaliyaan dadhabde Itiyoophiyaaf fayyaddi yaadni jedhu hinjiru. Yaada boodatti hafaadha.'' jedhu.
Mootummaa Ceehumsaa Dadhabaa
Mootummaan ceehumsaa idil addunyaarratti fudhatama haa argatu malee, ofis tahee daangaa Somaaliyaa eegsisuuf humna kan qabu hinturre.
Kanumaanis gamtaan manneen murtee Islaamummaa Daahir Aweeyisin hoogganamu, kutaa biyyattii kibbaa guutumaatti to'achuun, Itiyoophiyaarras jihaada labsuun isaa ni yaadatama.
Gamtaan kun ''Somaaliyaa Guddittii'' dhaabuuf kan barbaade ennaa tahu, keessattuu Itiyoophiyaa keessa kana argamu naannoo Ogaadeen harka galfachuuf dhaadatee ture.
Kanaan walqabatees, Ministirri Muummee duraanii Mallas Zeenaawii, waamicha mootummaa ceehumsaa irraa dhihaate fudhachuun Somaaliyaa keessa harka galfachuuf mana maree bakka bu'oota uummataaf gaaffii wayita dhiheessanitti mormii cimaatu isaan mudate.
Gamtaa manneen murtee Islaamummaa irraa ''sodaan wayitaawaa fi ifa'' tahe nu dura jira jechuun amansiisuu yaalan. Haatahu malee, miseensa paarlaamaa kan turan Obbo Bulchaa Dammaqsaan ''waljibbiinsa yeroo dheeraa'' fiduu danda'a jechuun sodaa isaanii ibsatanii turan.
Duula waraanaa fi waan fide
Bara 2001tti turtii waggoota lamaan booda gara biyyaatti kan deebi'e raayyaan biyyattii, gamtaa manneen murtee Islaamummaa yeroo muraasa keessatti rukuteera. Haatahu malee, kutaan dargaggootaa gamtaa kanaa al-Shabaab ammoo mataa olqabatee socho'uu jalqabe.
Itiyoophiyaanis yeroo lammataaf waraanashee gara Somaaliyaa ergun al-Shabaab waraanuu erga eegaltee booda, biyyoonni biroos makaman.
Al-Shabaab gamtaa manneen murtee Islaamummaa caalaa dhaadessaa akka tahe himama. Piroofesar Madihaaneenis uumamuu al-Shabaab harka galfachuu Itiyoophiyaa waliin walqabsiisu.
Har'a biyyaa badeera ennaa jedhamu, boru ammoo magaalaa guddittiitti haleellaa uuma. Kanarra dabres biyyoota ollaattillee yeroo garagaraatti haleellaa qaqqabsiiseera.
Goodayyaa suuraa Filannoo Somaaliyaa
Qaamni jeequmsi akka itti fufu barbaadu jiraa?
Somaaliyaan akka biyyaatti akka dhaabattuuf jaarmiyaaleen mootummaa adda addaa maallaqa biiliyoonotaan lakka'amu baasanis, rakkoon kun hiikamuu hin dandeenye.
''Waldhabdee Somaaliyaatin kan ka'e fedhiin siyaasaa fi diinagdee hedduun uumamaniiru. Dhaabbileen gargaarsaas waldhabdee jeequmsa kanarraa fayyadamaniiru. Kanaafis qaamoleen garagaraa waldhabdeen kun akka itti fufu barbaadu,'' jedhu Piroofesarri kun.
Itiyoophiyaan waraana ishee achi haa baastu malee, hirmaannaan waraanni biyyoota Keeniyaa, Yugaandaa fi Turk qabanii hedduu dabaleera.
Yeroo amma kana Itiyoophiyaan Somaaliyaa irratti shoorri taphattu olaanaa tahuu baatus, duula waraanaa amma dura taasifameen lammiileen Somaaliyaa, Itiyoophiyaaf illacha gaarii akka hin qabaanne taasiseera.
Akka fakkeenyaattis, duula filannoo pireezadaantummaa bara dabre gaggeeffame irrattis, qabxiilee farra-Itiyoophiyaa eeraa turan.
Akka falaattis, Somaalonni ofii isaaniitii, aadaa jaarsummaa qaban fayyadamuun, akkasumas yaadrimee yaadonni hawaasarraa gara mootummaa oliitti dhufuu qabu jedhu fayyadamuun of ijaaruu qabu jedhu Piroofersar Madihaanee.
Dhoo'insa Moqaadishoo: Dhoo'insa Somaaliyaatiin walqabatee angawoonni olaanoo hojiirraa ar'iaman
'Muslimni hiriyyummaaf wal hin argu, gaa'ila dhaabbata malee'